Warbixim:– Sicir-Bararka Ka Taagan Somaliland Oo Kor U Kacay Bishan Ramadaan Iyo Saamaynta Uu Ku Yeeshay Bulshada Danyarta Ah | Saxil News Network
Warbixim:– Sicir-Bararka Ka Taagan Somaliland Oo Kor U Kacay Bishan Ramadaan Iyo Saamaynta Uu Ku Yeeshay Bulshada Danyarta Ah
Hargeysa (Saxilnews)- Sicir-bararka iyo Sarrif-bararka is barkan ee ka taagan Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa cirka isku sii shareeray bishan Ramadaan, waxaannu saamayn taban ku yeeshay dadweynaha danyarta ah oo noloshu aad ugu sii adkaatay.
Sarrifka Boqolka Doolar, ayaa suuqyada Hargeysa maalmihii la soo dhaafay lagu kala qaadanayay gacanta dambe 930.000 SL Sh. Ah. Taasina waxay saamayn xun ku yeelatay maceeshadii daruuriga ahayd oo kor u sii kacday bishan Barakaysan oo dukaamaysigu aad u badan yahay. Dadka danyarta ah ayaa tahli waayay inay suuqyada galaan ka dib markii wixii ay siteen waxba u goyn waayay.
Go’aamadii xukuumaddu horaantii sannadkan ka soo saartay xakamaynta sarrif bararka ayaan wali waxba ka tisqaadin, iyadoo qiime dhacii ku habsaday lacagta Somaliland-na halkeedii yahay.
Sidoo kale, waxa dadweynuhu indhaha ku hayaan 16 maalmood ee ka hadhay wakhtigii xukuumadda Somaliland u qabatay shirkadaha isgaadhsiinta ee TELESOM iyo SOMTEL ee leh adeegyada lacagaha telefoonka laga xawilo ee ZAAD iyo E-DAHAB, oo lagu amray inay seer-faradooda ka saaraan oo aanay xawilin lacagta ka yar Boqolka doolar. Waxaanay xukuumaddu shirkadahaas fartay inay go’aankaas ku fuliyaan ugu dambayn 1-da Bisha July ee fooda innagu soo haysa. Adeegyada ZAAD iyo E-DAHAB, ayaa loo nisbeeyay inay kaalin ku leeyihiin sarrif bararka iyo sicir-bararka waddanka ku hawaarsaday.
Xigasho:— Wargeyska Dawan